Wallabag, yakavhurwa sosi imwe nzira kune Pocket | Linux Vakapindwa muropa
Zvichida vazhinji venyu makaziva chikumbiro chePocket mumusoro wepositi, chikumbiro chakanangana nekuverengwa kwekupedzisira kana izvo zvinoshandiswa zvinochengeta zvinyorwa kana kuverenga kuti zviverenge chero patinoda. Homwe inozviita zvakanaka kwazvo ipapo, asi chaizvo. Hazvishamise kuti yatove mune ese mabhurawuza ewebhu uye kuti vamwe vakaita seMozilla Firefox vanoisanganisira seyakakosha mashandiro.
Dambudziko re Homwe iri mune kuti isiri yemahara kunyorera, kureva kuti, data rese ratinaro, iro ratinochengeta, nezvimwe ... ndezvePocket uye hazvisi zvedu. Asi iyi ine mhinduro.
Iko kune yemahara yemahara application iyo inopa yakafanana nePocket, iyi application inonzi Wallabag. Wallabag software inotibvumidza kuchengeta chero kuverenga kana chinyorwa pane server yedu uye izvo zvinoita kuti zvese zvive zvedu uye isu tinogona kuzvibata zvakasununguka pasina kuvimba nevechitatu mapato. Wallabag chikumbiro icho chinogona zvakare kushanda sePocket, ndiko kuti, inopa zvakafanana sekunge yaive yechitatu-bato kunyorera, asi inokupa iwe mukana wekugona kuiisa pane yedu yega server.
Kana tikashandisa docker, tinogona kuisa Wallabag nekutaipa zvinotevera mune terminal:
Uye kana isu tine yega server uye isu hatina docker, ipapo tinofanirwa kunyora zvinotevera:
Uye kana tangoisa, Wallabag inogona kubatana needu smartphone kuburikidza neapp paGoogle Store and with yedu yewebhu browser kuburikidza nekuwedzera zviri pamutemo Iye ndewe.
Wallabag inotibvumidza kutora zvinyorwa, kuverengwa kwezvitoro uye kunyange kubatanidza zvinhu nemazita kuti tizvironge zvirinani. Dambudziko chete kana musiyano uripo nePocket ndewekuti Wallabag haina kupararira sePocket uye mune mimwe michina senge maReaders, haipo uye Pocket iripo.
Asi kana tikatsvaga imwe yemahara imwe, Wallabag ndeimwe yesarudzo dzakanakisa kuPocket, pamwe zvirinani kupfuura dzimwe nzira dzekudyidzana senge Instapaper Unofungei? Iwe unoshandisa Pocket kana imwe sevhisi kuchengetedza kuverenga kwako pamhepo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Wallabag, yakavhurwa sosi imwe nzira kune Pocket
Kwemwedzi yakawanda ikozvino, pakave nesarudzo yekuve neWallabag muKobo brand eReaders. Iwe unongofanirwa kuisa izvo zvavanazvo paGitHub uye voila, zvinyorwa zvako pafoni yako.